အချိန်ကာလပြ အီဒီယမ် ၁၅လုံး - Myanmar Network
အချိန်ကာလပြ အီဒီယမ် ၁၅လုံး
Posted by Soe Soe Win on November 21, 2012 at 17:32 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလ ဒါမှမဟုတ် အချိန်ကာလအမျိုးမျိုးကို ပြတဲ့ အီဒီယမ်တွေ အသုံးအနှုန်းတွေ အနက် နမူနာ လေ့လာကြည့်ဖို့ ရွေးချယ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ After hours - ညနေဘက်၊ ညဘက်၊ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးလုအချိန် (တစ်နေ့တာဆိုတာ ရုံးတွေ၊ အလုပ်တွေ ဖွင့်တဲ့ တစ်နေ့တာအချိန်ကို ဆိုလိုပါတယ်)
၂။ Banker's Hours - တိုတောင်းတဲ့ အချိန်ကာလကို ဆိုလိုပါတယ်။ (ဟိုရှေးတုန်းက ဘဏ်တွေ ဖွင့်တဲ့အချိန်က အခြား ရုံးတွေ အလုပ်တွေ ဖွင့်တဲ့အချိန်ထက် နည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် one who keeps banker's hours ဆိုတာ အလုပ်ချိန်နည်းသူလို့ ဆိုလိုပါတယ်)
၃။ Bat/wink/twinkling of an eye - မျက်စိတမှိတ်။ တိုတောင်းလွန်းလို့ မျက်စိတမှိတ်စာဘဲ ရှိတဲ့ အချိန်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Eleventh hour - သတ်မှတ်ချိန်ကုန်ဆုံးလု ကာလကို ဆိုလိုပါတယ်။ (ည ၁၂နာရီဆိုရင် သန်းခေါင် ရောက်ပြီမို့ ၁၁နာရီဟာ သန်းခေါင်မတိုင်မီ နောက်ဆုံးနာရီပါဘဲ။)
၅။ Flash - လျှပ်တစ်ပြက် အခိုက်အတန့် (လျှပ်တစ်ပြက်ဆိုတာ ခဏကလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။)
၆။ Heartbeat - နှလုံးတစ်ချက်ခုန် အခိုက်အတန့် (တိုတောင်းတဲ့ ကာလကလေးပါဘဲ)၊ “Inaheartbeat” ခဏကြာတဲ့အခါ လို့ သုံးလေ့ ရှိတယ်။ “a heartbeat away from ___” ဆိုတာကတော့ အထက်လူကြီး နှလုံးခုန် ရပ်သွားရင် ဆိုလိုတာကတော့ သေသွားရင် ရာထူးတိုးတော့မယ့် အနေအထားကို ဆိုလိုပါတယ်။ ___ရာထူးရဖို့ နှလုံးတစ်ခုန်ဘဲ လိုတော့တယ်လို့ ပြောတာပါ။
၇။ Jiffy - တစ်ခဏ (လျှပ်ပြက်တာလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ဘန်းစကားနဲ့ တူပါတယ်)၊ အတိုကောက် jiff လို့လည်း ပြောပါတယ်။
၈။ New York minute - တိုတောင်းသောအချိန် (နယူးယောက်မြို့ကြီး အလွန်စည်ကားတဲ့အတွက် နယူးယောက်က တစ်မိနစ်ဟာ အခြား အေးအေးဆေးဆေး နေရာဒေသတွေက တစ်မိနစ်ထက် ပိုပြီး ကုန်လွယ်သလို ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ On the hour - တစ်နာရီ စတင်ချိန်မှာ။ နောက်တစ်နာရီ ကူးပြောင်းပြီးစ အချိန်မှာ။
၁၀။ Shake - အလွန်တိုတောင်းသော အချိန်ကာလ။ “Two shakes” လို့ သုံးလေ့ရှိတယ်။ ဇစ်မြစ်ကတော့ “two shakes ofalamb's tail” သိုးကလေး အမြီး နှစ်ကြိမ် လှုပ်ရမ်းတဲ့အချိန်ကာလ ဆိုတဲ့ စကားကို အတိုကောက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ သိုးကလေးအမြီးလှုပ်တာ အလွန်မြန်တယ်ဆိုဘဲ။
၁၁။ Small hours - သန်းခေါင်ကျော် နံနက်အစောပိုင်း (အဲဒီအချိန်မှာ အချိန်နာရီကို ဖော်ပြတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ သေးငယ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။)
၁၂။ Spilt seconds - တစ်စက္ကန့်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း (စက္ကန့်ကို စိတ်ပိုင်းလိုက်ရင် အချိန်အလွန် တိုတောင်း သွားပါတယ်)၊ ပြေးပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ စုစုပေါင်း ကုန်လွန်တဲ့အချိန်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းကိုလည်း spilt လို့ ခေါ်ပါတယ်။
၁၃။ Tick - နာရီသံတစ်ချက် အခိုက်အတန့် (နာရီသံ တစ်ချက်ချက်နဲ့ မြည်နေတာကို စွဲပြီး သုံးနှုန်းတာ ဖြစ်တယ်) အငခု ဆိုတာ မူရင်း အဓိပ္ပာယ်ကတော့ နာရီဒိုင်ခွက် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ တိုင်းတာ မှတ်သားထားတဲ့ အမှတ်အသားကို ဆိုလိုတယ်။
၁၄။ Trice - အချိန်တိုကာလ (ဆွဲယူတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ စကားလုံးကနေ သုံးနှုန်းထားတာ ဖြစ်တယ်) မကြာခဏ “inatrice” ခဏလေးအတွင်း လို့ သုံးလေ့ရှိတယ်။
၁၅။ Witching hour - သန်းခေါင် သို့မဟုတ် ညလယ်ခေါင် အချိန် (witch စုန်းတွေ သန်းခေါင်အချိန်မှာ အပြင်ထွက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ အယူသည်းမှုကို အစွဲပြုပြီး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာတွေ၊ ထူးခြားဆန်းကြယ် တာတွေ ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ သန်းခေါင်အချိန်လို့ ဆိုလိုချင်ရင် Witching hour စုန်းထွက်ချိန် လို့ သုံးပါတယ်။)
Reference: 15 Idioms for Periods of Time by Mark Nichol (http://www.dailywritingtips.com/15-idioms-for-periods-of-time/)
Permalink Reply by eithazin on November 27, 2012 at 23:56
Permalink Reply by Ratan Biswas on November 28, 2012 at 10:10
Permalink Reply by Henry Varro on November 28, 2012 at 11:35
Permalink Reply by Mg Win Min Myat on November 29, 2012 at 16:12
ှု I want to join the British Council classes, but I don't know why the fees for classes are so high. Anyway, I have being got many advantages by Myanmar-network. So many thanks to British Council.
Permalink Reply by danny.babyghost.rosie89 on December 1, 2012 at 13:41
Thank u for Idioms ,but can u help me for the definitions of
1 in terms of
2 on good terms with
3 on equal terms
4 on unequal terms with
5 in the long term
6 comes to term with
I will be appriciate to u If u can help me with this
Permalink Reply by pyaephyothein on December 2, 2012 at 21:40
Permalink Reply by pyaephyothein on December 2, 2012 at 21:41
Permalink Reply by 2x6gn0ul73tts on December 4, 2012 at 13:31
Permalink Reply by kovida on January 6, 2013 at 12:02
Permalink Reply by hung keauh on July 15, 2013 at 11:12